Khuseysa qofka loo sameeyey qorshe meeleyn
Waxay khuseysaa qofka iska qoray halkaan intii ka horreysey 1dii jannaayo 2018 oo weli uu qorshe meeleyn u socdo.
Haddii aad jirrato
Soo gudbi warbixinta bisha
Yaa qorshe meeleyn loo sameeyey?
Qofka da’diisu u dhexeyso 18-64 sano oo la sharciga degganaanshaha lagu siiyey qaxootinimo, magangelyo ama qaraabo ahaan oo
halkaan iska qoray ka hor 1da jannaayo 2018
oo loo go’aamiyey dejinta qorshe meeleyn
oo hadda socda
Waa maxay qorshe meeleyn?
Wuxuu qorshahaaga meeleyntu ka kooban yahay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo kaa caawinaya sidii aad ku heli lahayd shaqo ama waxbarasho. Qorshaha meeleyntu waa mid aan isla dejinnay oo ku salaysan baahiyahaaga, waaya-aragnimadaada iyo waxa aad xiiseyneyso. Sida ugu badan waxaa ku jira barashada af-iswiidhishka, macluumaadka bulshada iyo tababar shaqo.
Sidee ku helayaa lacag aan masruufto?
Waxaa lagu siinayaa 231 karoon maalintii, shan maalmood toddobaadkii, inta uu socdo dejinta qorshaha meeleynta.
Waxaa lagu siinayaa ilaa 308 karoon maalintii, shan maalmood toddobaadkii, inta aad ka qaybqaadaneyso dhaqdhaqaaqyo ka mid ah qorshaha meeleynta.
Lacag intaas ka yar ayaad heleysaa haddii aad dhaqdhaqaaqyada qorshaha meeleynta ka maqnaato adiga oo aan haysan sabab macquul ah. Sidaas awgeed waxaa muhiim ah inaad mar walba nagu soo wargeliso maalinta ugu horreysa oo aad xanuunsato ama guriga la joogto ilmo xanuunsan.
Försäkringskassan ayaa bixisa lacagta meeleynta.
Lacagta meeleynta la siinayo qofka haysta qorshe meeleyn iyo inta uu xaqa u leeyahay waxaa go’aan ka gaara Xafiiska shaqada.
Waxaad kaloo xaq u yeelan kartaa lacago dheeraad ah oo kala duwan
Haddii haysato carruur waxaad xaq u yeelan kartaa lacag meeleyn oo dheeraad ah.
Haddii aad keligaa nooshahay waxaad xaq u yeelan kartaa lacag kiro.
Försäkringskassan ayaa go’aamineysa lacag meeleyn oo dheeraad ah iyo lacag kiro, iyadoo xisaabineysa inta ay le’eg tahay lacagta aad xaq u yeelan karto. Waxaad barta internet ee Försäkringskassan ka akhrisan kartaa inta ay le’eg tahay lacagta aad xaq u yeelan karto.
Lacagta meeleynta (Försäkringskassan)
Haddii aad xanuunsato oo aadan ka qaybqaadan karin hawlaha laguu qorsheeyey, waxaa muhiim ah inaad soo sheegto isla maalinta ugu horreysa oo aad xanuunsato. Haddii kale waxaad waayi kartaa lacagta meeleynta. Sidoo kale waxay khuseysaa haddii aad u baahato inaad guriga la joogto ilmo kaa xanuunsan. Waxaad xanuunkaas maalinta ugu horreysa ka qoreysaa barta aan internet ku leenahay.
Soo gudbi wixii maqnaansho ah
Waxaad bil walba soo gudbineysaa maalmaha aad hawlahaas ka maqnaatay, iyo haddii ay lacago kale ku soo galeen isla xilligaas. Taasi waxay shuruud u tahay in lagu siiyo lacagta meeleynta. Waxaad foomka warbixinta bisha ka buuxineysaa oo ka soo direysa barta internet.